ပှဲကွီးပှဲကောငျးတဈခုဖွဈလာဦးမယျ့ OMEGA League: Europe Immortal Division – Gaming Noodle
Epic Esports Events နဲ့ WePlay! တို့ ပူးတှဲကငျြးပတဲ့ OMEGA League ရဲ့ ဆုကွေးအမြားဆုံးနဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုအပွငျးထနျဆုံးဖွဈတဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ကတော့ မကွာခငျ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ စတငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ OMEGA League ကို Europe, America နဲ့ Asia Region ကွီး ၃ ခုမှာကငျြးပခဲ့ပွီး အဆိုပါလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ အမွငျ့ဆုံးအဆငျ့လို့ဆိုရမယျ့ Immortal Division ကိုတော့ အသငျးကောငျးတှေ အမြားဆုံးရှိတဲ့ Europe မှာပဲကငျြးပသှားမှာပါ။
OMEGA League: Europe Immortal Division ပွိုငျပှဲမှာ ဆုကွေးအနနေဲ့ ဒျေါလာ ၅ သိနျးတိတိ ခြီးမွှငျ့သှားမှာဖွဈပွီး တိုကျရိုကျဖိတျချေါခွငျးခံရတဲ့ အသငျး ၁၀ သငျးနဲ့ လကျရညျစဈပှဲက တဈဆငျ့ အောငျမွငျလာတဲ့ အသငျး ၂ သငျး၊ စုစုပေါငျး ၁၂ သငျးတို့က ယှဉျပွိုငျဆော့ကစားသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားခကျြတဈခုအနနေဲ့ NA ရဲ့အငျအားအကွီးဆုံးအသငျးလို့ဆိုရမယျ့ EG ကလညျး Europe Region အတှကျ ကငျြးပပေးတဲ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ပါဝငျယှဉျပွိုငျသှားဦးမှာပါ။
OMEGA League: Europe Immortal Division ပွိုငျပှဲကို တိုကျရိုကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျဖို့ ဖိတျချေါခံခဲ့ရတဲ့ အသငျးတှကေတော့ Team Secret, Na’Vi, Team Liquid, Virtus.pro, Fly To Moon, Evil Geniuses, OG, Alliance, Team Nigma, Ninjas in Pyjamas တို့ဖွဈပွီး လကျရညျစဈပှဲကတဈဆငျ့ တကျရောကျလာတဲ့ အသငျးတှကေတော့ OG.Seed, Cloud9 အသငျးသားဟောငျးတှပေါဝငျတဲ့ 5men နဲ့ Vikin.gg အသငျးတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ ၁၂ သငျးကို အုပျစု ၂ စုခှဲကာ ယှဉျပွိုငျစမှောဖွဈပွီး အုပျစုအနအေထားကိုတော့ အောကျကဇယားမှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
Update – 5men in Group A & Vikin.gg in Group B
ဒီပွိုငျပှဲကို Group Stage နဲ့ Playoffs ဆိုပွီး အဆငျ့ ၂ ဆငျ့ခှဲကာကငျြးပသှားမှာပါ။ Group Stage မှာ အသငျးပွညျ့ပတျလညျ BO3 ကစားရမှာဖွဈပွီး အုပျစုထိပျဆုံး ၂ သငျးစီက Playoffs အဆငျ့ရဲ့ Upper Bracket ကိုလညျးကောငျး၊တတိယနရောကအသငျးတှကေ Playoffs အဆငျ့ရဲ့ Lower Bracket ကိုလညျးကောငျးတကျရောကျသှားနိုငျမှာဖွဈပွီး အုပျစုဇယားရဲ့အမှတျအနညျးဆုံး ၁ သငျးစီကတော့ ပွိုငျပှဲကနထှေကျခှာသှားရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အုပျစုဇယားမှာ အဆငျ့ ၄ နဲ့ ၅ နရောရရှိခဲ့တဲ့အသငျးတှကေတော့ Play-in လို့ချေါတဲ့ကွားအဆငျ့မှာဆော့ကစားရဦးမှာဖွဈပွီး အနိုငျရရှိတဲ့ ၂ သငျးကတော့ Playoffs အဆငျ့ရဲ့ Lower Bracket ကိုတကျရောကျနိုငျခှငျ့ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ Playoffs အဆငျ့မှာ ထုံးစံအတိုငျး Double Elimination ပုံစံကိုမှ BO3 ယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈကာ Grand Final တဈခုတညျးမှာပဲ BO5 ယှဉျပွိုငျဆော့ကစားရမှာပါ။
လာမယျ့ ဩဂုတျ ၁၄ ရကျနမှေ့ာ OMEGA League: Europe Immortal Division ပွိုငျပှဲရဲ့ Group Stage ပှဲစဉျတှစေတငျမှာဖွဈပွီး Playoffs ပှဲစဉျတှကေတော့ စကျတငျဘာ ၂ ရကျနမှေ့ာစတငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ခတ်ေတအနားယူထားတဲ့ Europe ပုလ်လငျနနျးပျေါကဘုရငျကွီး Team Secret, OGA Dota Pit ဆုဖလားကို လောလောလတျလတျဆှတျခူးထားတဲ့ Team Nigma, NA ကနတေကူးတကလှမျးပွိုငျမယျ့ Evil Geniuses, TI ကိုနှဈကွိမျတိုငျတိုငျရယူပွီး သမိုငျးသဈရေးထှငျးထားနိုငျတဲ့ OG တို့လိုအသငျးကွီးတှအေပွငျ Alliance, Team Liquid, VP နဲ့ FTM လိုဖကျြမွငျးကောငျးအသငျးတှပေါဝငျတာကွောငျ့ စောငျ့ကွညျ့ရကြိုးနပျမယျ့ ပွိုငျပှဲကောငျးတဈခုဖွဈလာဖို့က သခြောသလောကျပါပဲ။
ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဦးမယ့် OMEGA League: Europe Immortal Division
Epic Esports Events နဲ့ WePlay! တို့ ပူးတွဲကျင်းပတဲ့ OMEGA League ရဲ့ ဆုကြေးအများဆုံးနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ OMEGA League: Europe Immortal Division ကတော့ မကြာခင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ OMEGA League ကို Europe, America နဲ့ Asia Region ကြီး ၃ ခုမှာကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ဆိုရမယ့် Immortal Division ကိုတော့ အသင်းကောင်းတွေ အများဆုံးရှိတဲ့ Europe မှာပဲကျင်းပသွားမှာပါ။
OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုကြေးအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၅ သိန်းတိတိ ချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး တိုက်ရိုက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ အသင်း ၁၀ သင်းနဲ့ လက်ရည်စစ်ပွဲက တစ်ဆင့် အောင်မြင်လာတဲ့ အသင်း ၂ သင်း၊ စုစုပေါင်း ၁၂ သင်းတို့က ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ NA ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးအသင်းလို့ဆိုရမယ့် EG ကလည်း Europe Region အတွက် ကျင်းပပေးတဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားဦးမှာပါ။
OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲကို တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံခဲ့ရတဲ့ အသင်းတွေကတော့ Team Secret, Na’Vi, Team Liquid, Virtus.pro, Fly To Moon, Evil Geniuses, OG, Alliance, Team Nigma, Ninjas in Pyjamas တို့ဖြစ်ပြီး လက်ရည်စစ်ပွဲကတစ်ဆင့် တက်ရောက်လာတဲ့ အသင်းတွေကတော့ OG.Seed, Cloud9 အသင်းသားဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့ 5men နဲ့ Vikin.gg အသင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ၁၂ သင်းကို အုပ်စု ၂ စုခွဲကာ ယှဉ်ပြိုင်စေမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုအနေအထားကိုတော့ အောက်ကဇယားမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲကို Group Stage နဲ့ Playoffs ဆိုပြီး အဆင့် ၂ ဆင့်ခွဲကာကျင်းပသွားမှာပါ။ Group Stage မှာ အသင်းပြည့်ပတ်လည် BO3 ကစားရမှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုထိပ်ဆုံး ၂ သင်းစီက Playoffs အဆင့်ရဲ့ Upper Bracket ကိုလည်းကောင်း၊တတိယနေရာကအသင်းတွေက Playoffs အဆင့်ရဲ့ Lower Bracket ကိုလည်းကောင်းတက်ရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အုပ်စုဇယားရဲ့အမှတ်အနည်းဆုံး ၁ သင်းစီကတော့ ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အုပ်စုဇယားမှာ အဆင့် ၄ နဲ့ ၅ နေရာရရှိခဲ့တဲ့အသင်းတွေကတော့ Play-in လို့ခေါ်တဲ့ကြားအဆင့်မှာဆော့ကစားရဦးမှာဖြစ်ပြီး အနိုင်ရရှိတဲ့ ၂ သင်းကတော့ Playoffs အဆင့်ရဲ့ Lower Bracket ကိုတက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Playoffs အဆင့်မှာ ထုံးစံအတိုင်း Double Elimination ပုံစံကိုမှ BO3 ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ကာ Grand Final တစ်ခုတည်းမှာပဲ BO5 ယှဉ်ပြိုင်ဆော့ကစားရမှာပါ။
လာမယ့် ဩဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့မှာ OMEGA League: Europe Immortal Division ပြိုင်ပွဲရဲ့ Group Stage ပွဲစဉ်တွေစတင်မှာဖြစ်ပြီး Playoffs ပွဲစဉ်တွေကတော့ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ခေတ္တအနားယူထားတဲ့ Europe ပုလ္လင်နန်းပေါ်ကဘုရင်ကြီး Team Secret, OGA Dota Pit ဆုဖလားကို လောလောလတ်လတ်ဆွတ်ခူးထားတဲ့ Team Nigma, NA ကနေတကူးတကလှမ်းပြိုင်မယ့် Evil Geniuses, TI ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရယူပြီး သမိုင်းသစ်ရေးထွင်းထားနိုင်တဲ့ OG တို့လိုအသင်းကြီးတွေအပြင် Alliance, Team Liquid, VP နဲ့ FTM လိုဖျက်မြင်းကောင်းအသင်းတွေပါဝင်တာကြောင့် စောင့်ကြည့်ရကျိုးနပ်မယ့် ပြိုင်ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့က သေချာသလောက်ပါပဲ။